Naing Naing, Author at MoviesFan
Drama အသစ်လေးမှာ အတူမြင်တွေ့ရမယ့် Song Hye Kyo နဲ့ Park Bo Gum
Song Hye Kyo နဲ့ Park Bo Gum တို့နှစ်ဦးကတော့ အသစ်ထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် Drama မှာ ပါဝင်သရုပ်ကြမယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်ရှိလာပါတယ်။ Drama လေးရဲ့ နာမည်ကတော့ ‘Boyfriend’ လို့သိရပါတယ်။ Park Bo Gum ကတော့ ဒီ Drama မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်ထဲက လက်ခံထားပြီးသားလို့သိရပါတယ်။ Song Hye Kyo ရဲ့ Agency ကတော့ “Drama အသစ် Boyfriend ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းတွေကိုတော့ ရရှိထားခဲ့ပြီဆိုတာမှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Song Hye Kyo ဖက်ကနေပြီး ဒီ Drama မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ကိုတော့ ယခုထိ Confirm လုပ်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး” ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
(၂) နှစ်တာကာလနဲ့ ချစ်သူသက်တမ်း အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Seo In Guk နဲ့ Park Bo Ram…
စိတ်မကောင်းစရာသတင်းလေးတစ်ခုတော့ ထပ်ထွက်လာပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ခါ လမ်းခွဲလိုက်ကြတဲ့ Kpop Cele အတွဲလေးကတော့ Shopping King Louie ဆိုတဲ့ Drama လေးထဲက မင်းသားချောချောလေး Seo In Guk နဲ့ အဆိုတော်ချောချောလေး Park Bo Ram တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ Superstar K မှနေပြီး အနုပညာလောကထဲရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Kpop Cele တွေပါ။ Seo In Guk နဲ့ Park Bo Ram တို့က အသက်၇နှစ်လောက်ကွာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ၂၀၁၆ ထဲက ချစ်သူတွေအဖြစ်နဲ့ ရှိခဲ့ကြပေမယ့် ပရိတ်သတ်ကြီးကိုတော့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလမှသာ သူတို့ရဲ့ Dating Confirm လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ Park Bo Ram ရဲ့အမေဖြစ်သူ Read More
Bae Doona နဲ့ Son Seok Gu တို့နှစ်ဦးရဲ့ Dating နဲ့ပတ်သက်ပြီး Bae Doona ရဲ့ Agency မှငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်….
Bae Doona နဲ့ Son Seok Gu တို့ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းက သူမတို့နှစ်ဦး Date လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Report လုပ်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ Bae Doona ကိုတော့ ပရိတ်သတ်အတော်များများသိကြမှာပါ။ ယခုသူမက Netflix ကနေထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ Sense8 မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ ပင်တိုင် အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Son Seok Gu ကတော့ Sense8 Season-2 မှာပါဝင်လာခဲ့တဲ့ အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့နှစ်ဦးကို လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတော့ Social Media တွေမှာ Read More
`My Golden Life´ ရဲ့ မင်းသား Park Shi-hoo ကို Horror Romance Drama အသစ်လေးမှာ ပြန်တွေ့ရတော့မှာလား ?
`KBS´ ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် `Lovely Horribly´ Drama ဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် Park Shi-hoo ကမ်းလှမ်းခံရတယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။ Park Shi-hoo ကတော့ ဇာတ်ကားကမ်းလှမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတစ်ခုမှ Confirm လုပ်ထားခြင်းမရှိသေးပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရမယ့်ဇာတ်ရုပ်က သူ့အတွက်တော့အရမ်းကို အတွေ့အကြုံကောင်းရစေမယ်ဆိုတာကိုတော့ သူကိုယ်တိုင် ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ Read More
`Netflix´ ကနေထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် `Busted´ Variety Show အသစ်ရဲ့ Release Date ထွက်လာ
American Entertainment Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ `Netflix´ ကနေထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် `Busted´ Variety Show ရဲ့ Release Date လေးထွက်လာပါပြီ။ ကာလကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ ဒီ Variety Show အသစ်လေးကို မေလ၄ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
၂၀၁၇ ထဲကစတင်ပုံဖော်ဖန်တီးလာခဲ့တဲ့ `Busted´ အမည်ရတဲ့ Variety Show လေးဟာဆိုရင်တော့ဖြင့် ယခင်ကတခါမှရိုက်ကူးခြင်းမရှိတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးရှေ့ရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Show လေးမှာဆိုရင် `Running Man´ အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Yoo Jae Suk နဲ့ Lee Kwang Soo, Ahn Jae Wook, Kim Jong Min, Park Min Young, နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသည်းကျော် `Exo´ အဖွဲ့ဝင် Sehun နဲ့အတူ `Gugudan´ ရဲ့ Kim Sejeong Read More
Netflix, Variety Show